Fitaovana Fikajiana Mesoamerican : Taolana Ho An’ireo Kajy Maoderina · Global Voices teny Malagasy
Fitaovana Fikajiana Mesoamerican : Taolana Ho An'ireo Kajy Maoderina
Voadika ny 16 Oktobra 2015 6:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, 日本語, bahasa Indonesia, Español
Fitaovana fikajiana Mesoamerican. Pikantsary tamin'ny lahatsary nalefa tamin'ny YouTube.
Fitaovana iray fikajiana nampiasaina tao amin'ireo kolontsaina Mesoamerican Espaniôla taloha ny nepohualtzintzin, tafiditra ao anatin'izany ireo Mayana, izay ankehitriny miverina any anaty fandaharam-pianarana maro, izay mampiasa io fitaovana mahery vaika io mba hampianarana matematika dieny mbola kely amin'ny fomba voajanahary tanteraka.
Ny anarana nepohualtzintzin dia noforonina avy amin'ny teny roa tao amin'ny teny Mesoamerican Nahuatl: nepohual, izay midika ho “fanisàna”, ary tzintzin, izay midika ho “mendri-kaja na maharaka ny toetrandro”. Noho izany, ny teny hoe nepohualtzintzin dia midika “Ny fanisàna maharaka ny toetrandro.”
Tsy misy fahagagàna mikasika io fitaovana tranainy io, fantatra tsotra fotsiny sahala amin'ny nepo. Tsy ilàna fampiasàna taratasy na pensilihazo io, saingy kosa manao ireo kajiny marina amin'ny fampiasàna vakana.
Nifototra tamin'ny isa 20 ny rafi-marikan'i Mayan, tsy toy ny fomba fanisàna ampiasaina ankehitriny mihintsy. Ahitàna ny isa aotra io fomba fanisàna mifototra amin'ny isa roapolo io:
.Mitovy avokoa ny tarehimarika mikasika ny fanisàna mifototra amin'ny isa roapolo, afatsy ny isa 20 izay io no fototra iaingana. Ilàna isa 20 samihafa io fomba io dia ny 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ary ny 19 izay asehon'ny isa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I sy J.
Mikasika ny fomba fanisàna mifototra amin'ny isa roapolo, afaka hanaovana asa fototra matematika toy ny adisanin'ny fampifanampiana sy fampitomboana ry zareo Mayans amin'ny alalan'ny fampiasana boribory kely maromaro narafitra tanaty tabilao vita tamin'ny hazo, na tonga dia nofaritana avy hatrany teo amin'ny tany, ary nampiasàn'izy ireo vatokely na voan-javatra mba hanehoana ireo isa. Fantatra tamin'ny hoe nepohualtzintzin io fitaovana fanisàna io.
.Noho ny habetsahan'ireo kajy azo atao aminy, azo oharina amin'ny solosaina maoderina ny nepohualtzintzin. Fitambaran'ireo vakana 91 voatsinjara ho tsanganana 13, misy vakana fito izy io. Ny isa iraika amby sivifolo dia ampahaefatry ny 364, mikasika ny isan'ny andro anatin'ny taona iray, ka ny isan'ireo vakana rehetra dia maneho vanintaona iray. Ny 91 indroa dia 182, tsingerim-potoanan'ny katsaka:
Fomba fanisàna nilain'ireo razambenay teo aloha teo amin'ny fiainany ny fomba fanisàna nepohualtzintzin; tsy maintsy nanisa andro izy ireo mba hahafahany niasa ny tany, ny zava-mitranga ara-natoraly sy ireo tsingerina fandalovany, sady mijery, ohatra, fa isanandro dia miposaka avy any atsinanana foana ny masoandro, miakatra eny an-danitra, ary avy eo mody any andrefana.
Tsara ny manamarika fa ny sivilizasiona Mayan no voalohany tao Amerika nanehoana ny isa aotra:
Namela dian-tanana teo amin'ny fotoana ny matematika Mayan; talohan'ireo sivilizasiona hafa, tonga niaraka tamina foto-kevitra revolisiona iray ny Mayans: ny isa aotra.
Marika iray entina hanehoana zavatra tsy misy ny aotra; nefa, ny foto-kevitra Mayan mikasika ny isa aotra tsy midika mihintsy tsy fisiana na fandàvana. Ho an'ny Mayans, midika ho fahafenoana ny aotra. Ohatra, raha hanoratra ny isa 20, ny aotra, apetraka eo amin'ny laharana aloha, dia midika tsotra fotsiny fa feno ny isa.
Ankehitriny, nanjary nampiasaina io fitaovana talohan'ny tantara espaniôla io mba hahamora ny fampianarana matematika, ankoatra ireo fampiasàna hafa:
Fampiasa matetika, mamporisika ny fanamoràna manisa io, manatsara ny lafiny fihandronan-tsaina, fomba fisainana lojika, fitadidiana, hakingana ara-tsaina, firindràna eo amin'ny fikirakiràna ny vaovao ary fisarihana jery. Azo heverina ho làlana iray mahomby amin'ny fanazàrana ny atidoha ny fampiasana nepo, satria mitazona azy mba hihodina tsara ary mety foana ho an'ny salan-taona rehetra. Ny nepo dia iray amin'ireo fitaovana vitsivitsy izay manetsika indray miaraka ny betsaka indrindra amin'ireo retsika (fifandraisan'ireo nerona mpitatitra hetsika) eo anelanelan'ireo lavaka ao amin'ny atidoha, fanampin'izany mba ho fanandratana ny fampivoaran'ireo ankizy ny fahaizan'izy ireo mampiasa ny maoterany.
Ity tranonkala ity dia manolotra torolalana fampianarana ny fomba fampiasàna ny nepohualtzintzin. Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, asehon'ny profesora Everardo Lara González ny fomba fanaovana kajy matematika amin'ny nepo: